Faah faahin ka soo baxsa duqeyn ay ka geysteen Diyaarado Deegaanka Kudhaa – SBC
Faah faahin ka soo baxsa duqeyn ay ka geysteen Diyaarado Deegaanka Kudhaa
Posted by Webmaster on December 25, 2011 Comments
Wararka ka imanaya Gobolka jubada Hoose ayaa sheegaya in duqeyn ka dhacday deegaanka Jasiirada ah ee Kudhaa ay sababtay Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh.
Duqeynta oo la sheegay in ay geeysteen diyaarado kuwa Qumaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada Dowlada Kenya ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyooday hal qof halka in ka badana ay dhaawac yihiin.
Waxaa la xaqiijiyay in dadka ku waxyeeloobay ay dhamaantood ahaayeen dadka deegaanka, waxaana ay diyaaradahani bamka la dheceen bartamaha deegaankaasi iyadoo taasi ay wal wal iyo walaac ka muujiyeen dadka deegaanadaasi ku dhaqan.
“Waxay aheyd xili Gabal dhac ah, oo ay dadku guryahooda ku xeroonayaan, waxaana ka warhelnay duqeyn ay geysanayaan diyaradaha helacobters-ka, si aad ah ayaan uga walaacsannahay falalkan” ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka jasiirada Kudhaa oo la hadlay Xafiiska SBC International ee Gobolka Gedo.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamada Kenya duqeymo loo adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa miiga looyaqaanba ku garaacaan deegaano ka mid ah gobolka jubada hoose iyo gobolo kale oo ku yala koonfurta soomaaliya .
Waxay aheyd maalmo ka hor markii deegaanka Hoosingoow oo ka tirsan gobolka Jubada hoose ay diyaaradaha miiga u geystaan duqeyn taas oo sababtay sida wararka lagu hayo khasaare soo gaaray dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
C/khadar Maxamed Siraad
SBC International Gedo.
salan dhamaan umda somaliyed meelkasto aad jogtaan waxan illah idinka baryayaa cafimad cimri dheer iyo cibdo fiican iyo in illah cadowgiina qabto waxan aad uga xumahay in laduqeeyo dad rayida meelo ay ku nool yihin iyadoo dawlada kenaya ku andaconayso waxaan illa linayaa shacabkayga lakiin shacabka somaliyed mahan miyaa iyagu shacab bini adana aad ayaan uga xumahay in nimanka masuuliyinta ka ah dawlada somaliya ay arintaa qataan kuna racaan in shacabkoda la duqeeyo iyadoo la ilalinayo shacab kale aduunka waxaan kacodsanaynaa inay arintaan fira gara uyeeshaan illah waxaan kabarya yaa in ilaah badbadiyo shacabka somaliyeed meel walbo uu jogo Amiin iyagana waxaan leyahay isku kalsonada illahna talo sarta
Xirsi deni says:
Mabda.eenu waadiin dayashiyo kudhaqan mudan dadka reer puntlaanow haba laydin dooxee. Dabadhilifka weerara daashkay fariistaan miineeya doqomada dariiqyada kuweerara dacar haba ahaadee xaqa doona weligiin doorta nolosha aakhiro diida gaala raacyada dunideenu waa laba digtoonaada weligiin